Shiinaha Jumladda Dhimista Shiinaha Midabka Dahaarka leh ee Zinc Aluminium Sheet/PPGL Galvalume Steel Coil Warshada iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Qiimo dhimis Jumlo ah Xaashida Aluminium ee Midabka Dahaarka leh ee Shiinaha/PPGL Galvalume Steel Coil
Gariiradda birta ah ee PPGL waa shey ka samaysan birta galvalume, ka dib markii dusha la hagaajiyay (hoos u dhigista kiimikaad iyo daaweynta beddelka kiimikaad), hal ama dhowr lakab oo daahan organic ah ayaa lagu dahaadhay dusha sare, ka dibna la dubay oo la daaweeyay.Marka lagu daro ilaalinta lakabka alu-zinc, dahaarka organic ee lakabka alu-zinc wuxuu door ka ciyaaraa daboolida iyo ilaalinta midabka birta ah ee dahaarka leh, ka hortagga gariiradda birta inay daxaloobaan, adeeggeeduna wuxuu ku saabsan yahay 1.5 jeer ka badan tan galvalume birta gariiradda.
Waxaan haynaa hagaajinta iyo hagaajinta badeecadeena iyo adeegeena.Isla mar ahaantaana, waxaan u qabanaa shaqada si firfircoon si aan u samayno cilmi-baaris iyo hagaajinta Jumlada Lacagta Shiinaha Midabka Dahaarka Zinc Aluminium Sheet / Prepainted PPGL Galvalume Steel Coil, Wadashaqeyn daacad ah adiga, gebi ahaanba waxay abuuri doontaa farxad berrito!
Waxaan haynaa hagaajinta iyo hagaajinta badeecadeena iyo adeegeena.Isla mar ahaantaana, waxaan u qabanaa shaqada si firfircoon si aan u samayno cilmi baaris iyo hagaajin China Coil PPGL, Gi Gl PPGI PPGL, "Tayada wanaagsan iyo qiimaha macquulka ah" waa mabaadi'da ganacsi our.Haddii aad xiisaynayso xalalkayaga ama aad qabto wax su'aalo ah, xasuusnoow inaad xor u tahay inaad nala soo xidhiidho.Waxaan rajeyneynaa inaan xiriir iskaashi kula sameyno mustaqbalka dhow.
2.Material: ASTM A792, dhammaan si waafaqsan codsiga macaamiisha
3.Color: midabka RAL ama sida ku cad muunada macaamiisha
4. Dhumucdiisuna: 0.12mm-0.4mm, oo dhan waa la heli karaa
6. Length: sida waafaqsan shuruudaha macmiilka
7. Aqoonsiga gariiradda: 508/610mm
8. Miisaanka gariiradda: sida waafaqsan shuruudaha macmiilka
9.Alu-zinc daahan: 40-275 g / m2
10.Filim: 15/5 um, ama sida looga baahan yahay macmiilka
11.Type of daahan: PE, HDP, SMP, PVDF
12.Qaabka loo diyaariyey gariiradda birta ah ee galvalume:
* Koodh (dhamaystir) kaas oo bixiya midab, muuqaal iyo muuqaal wanaagsan iyo filim xannibaad ah si kor loogu qaado cimri dhererka muddada dheer.
* Jaakad hore si looga hortago hoos u dhigida rinjiga oo kor loogu qaado iska caabinta daxalka.
*Lakabka ka-hortagga ayaa lagu dabaqay ku dheggan wanaagsan iyo si kor loogu qaado caabbinta daxalka.
*Salool bir ah oo sal ah.
Gariiradda birta ee PPGL waxay leedahay miisaan fudud, muuqaal qurux badan iyo wax qabad wanaagsan oo ka hortagga daxalka, waxaana si toos ah loo farsamayn karaa.Marka lagu daro ilaalinta lakabka zinc, dahaarka organic ee lakabka zinc wuxuu door ka ciyaaraa daboolida iyo ilaalinta xariijimaha birta ee miridhku, iyo nolosheeda adeeggu waxay ka dheer tahay 1.5 jeer ka badan kan galvanized.
Gariiradda birta ah ee PPGL waxaa inta badan loo isticmaalaa xayaysiinta, dhismaha, qalabka guriga, qalabka korontada, alaabta guriga iyo gaadiidka.Xabagta ku habboon ayaa loo doortaa dahaarka loo isticmaalo duubabka midabada leh iyadoo loo eegayo jawiga isticmaalka kala duwan, sida polyester-silicon modified polyester, polyvinyl chloride plastisol, chloride polyvinylidene, iwm. badeeco iyo adeeg.Isla mar ahaantaana, waxaan u qabanaa shaqada si firfircoon si aan u samayno cilmi-baaris iyo hagaajinta Jumlada Lacagta Shiinaha Midabka Dahaarka Zinc Aluminium Sheet / Prepainted PPGL Galvalume Steel Coil, Wadashaqeyn daacad ah adiga, gebi ahaanba waxay abuuri doontaa farxad berrito!
Dhimista Jumlada Shiinaha Coil PPGL, Gi Gl PPGI PPGL, "Tayo wanaagsan iyo qiimo macquul ah" waa mabaadi'da ganacsi eeyada.Haddii aad xiisaynayso xalalkayaga ama aad qabto wax su'aalo ah, xasuusnoow inaad xor u tahay inaad nala soo xidhiidho.Waxaan rajeyneynaa inaan xiriir iskaashi kula sameyno mustaqbalka dhow.